Laba haween ah oo isbitaalada la dhigay kadib markii seygooda dhaawacyo u gesteen – The Voice of Northeastern Kenya
Laba haween ah oo isbitaalada la dhigay kadib markii seygooda dhaawacyo u gesteen
Iyadoo maalmo laga soo wareegay kadib markii nin u xaskiisa gacmaha ka jaray sababo la xariira in ay ilmo u dhali waysay ayaa waxaa hadda lagu soo waramayaa dhacdo kale oo laba haween isbitaalada la dhigay kadib markii dhaawacyo nimankooda u gesteen.
Haweeneyda koowad ayaa oo lagu magacaabo Zipporah Wanjugu oo 32 sano jir ah ayaa la sheegay in seygeeda uu madaxa bangad kala dhacay shalay galab oo arbaca eheyd.
Ms Wanjugu ayaa musiibadaasi la kulantay kadib markii ay iskudayday in cunug yar oo sedex bilood dhalan oo ay dhashay kasoo qaadato seygeeda oo goor hore ay kukala tageen xurguf soo kala dhaxgashay awgeed, waxuuna falkaasi ka dhacay tuulada Wiyumiririe oo katirsan Countiga Laikipia
Ciidamada amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay ninkaasi, waxaana haweeneyda xaaladeeda caafimad lagu la tacaalayaa isbitaalka iyadaa ka dhaawacan madaxa iyo gacmaha.
Haweeneyda labaad oo iyadana magaceeda lagu sheegay Vivia Moraa oo 23 sano ayaa iyadana uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay seygeeda u diiday in ay wax kasiiso lacag ya mushaar ahaan u soo qaadatay.
Mr Moraa ayaa shegtay in seygeeda uu markii hore ugu hanjabay in uu gacmaha kajiro doonoo sidii goor hore ay ka daawanayeen televishanka.
Tani ayaa ku soo aadeysaa xilli maalin ka hor ay eheyd markii nin xaaskiisa uu gacmaha kajaray labadeeda gacmood kadib markii uu ku eedeeyay in ay caruur u dhali waysay muddo 7 sanadood ah oo ay is qabeen.
← Laba sarkaal oo dowlada katirsan oo loo xiray fal weerar loogu gestay muwaadiniin u dhalatay dalka Shiinaha
Dowlada Countiga Nairobi oo kuguuldareysatay in ay dumiso dhismooyin la doonayay in la bur burburiyo →